Yakachipa Electroplated aruminiyamu chiwanikwa machined zvikamu fekitori uye vanotengesa | Ouzhan
Aluminium alloy electroplating michina zvikamu
Electroplating yakakamurwa kuita rack, barrel yakanamirwa pamifananidzo, inoenderera yakanamirwa pamuromo uye brashi yakanamirwa pamifananidzo, izvo zvinonyanya kuve zvine chekuita nesaizi uye batch yezvikamu zvinofanirwa kuisirwa. Rack yakakwenenzverwa inokodzera zvigadzirwa zvehukuru hwese, senge mota bumpers, mabhasikoro emabhasikoro, nezvimwe. Bharati yakakwenenzverwa inokodzera zvidimbu zvidiki, zvekusunga, ma washer, mapini, nezvimwewo. Kuenderera mberi kwekukanda kwakakodzera waya dzakagadzirwa nemasaini uye mitsetse. Bhurashi yakanamirwa pamhepo yakakodzera kune yakasarudzika plating kana kugadzirisa.
Iyo electroplating solution inosanganisira acidic, alkaline, uye acidic uye isina kwazvinogadzirisa mhinduro ine chromium musanganiswa. Kunyangwe zvodii nzira yekudyira inoshandiswa, matangi ekurongedza uye hanger mukubatana nezvigadzirwa kuti zvifukidzwe uye mhinduro yekurongedza inofanira kunge iine imwe nhanho yeVersatility.
Ouzhan aruminiyamu chiwanikwa electroplating nickel yakanamirwa pamifananidzo kuratidza:
Nheyo yealuminium alloy yakanamirwa pamifananidzo
Electroplating inoda yakaderera-voltage yakakwira-yazvino magetsi magetsi kune iyo electroplating tangi uye chigadzirwa chemagetsi chinoumbwa neelectroplating solution, zvikamu zvinofanirwa kuvezwa (cathode) uye anode. Kuumbwa kwesarudzo yeelectroplating kunosiyana zvichienderana neplating layer, asi zvese zvine munyu mukuru unopa simbi ions, inoomesa mumiriri inogona kuomesa ioni yesimbi mumunyu mukuru kuita yakaoma, bhafa rinoshandiswa kudzikamisa pH mhinduro, anode activator, uye Special anowedzera.
Iyo electroplating maitiro ndeye maitiro ayo esimbi ions mune yakanamirwa pamhinduro inogadziriswa kuita maatomu esimbi kuburikidza neiyo electrode reaction pasi pechiito cheiyo yekunze magetsi munda, uye simbi inoiswa pane iyo cathode. Naizvozvo, iyi simbi electrodeposition maitiro ayo anosanganisira emvura chikamu kuwanda kuwanda, electrochemical reaction uye electrocrystallization.
Mune tangi yekudyira ine iyo electroplating solution, iyo yakacheneswa uye yakanyanya kugadzirirwa zvikamu zvekuiswa zvinoshandiswa seye cathode, uye iyo anode inogadzirwa nesimbi yakarongedzwa, uye iwo matanda maviri akabatana zvakabatana neakanaka uye asina kunaka maelekitirodhi esimba reDC kugovera. Iyo electroplating solution inoumbwa ne aqueous solution ine simbi-yakafukidzwa makemikari, conductive munyu, mabhaudhi, pH zvigadziriso, uye zvinowedzera.
Mushure mekupihwa simba, ayoni esimbi mune ye electroplating solution inoenda kune cathode pasi pechiito chemusiyano ungangoita wekutsemura. Iyo simbi yeanode inoumba simbi ions mune ye electroplating mhinduro yekuchengetedza kuwanda kwesimbi ion kuti ifukidzwe. Mune zvimwe zviitiko, senge chromium yakanamirwa pamuromo, anode isingaputsike yakagadzirwa nemutobvu uye lead-antimony alloy inoshandiswa, iyo inoshanda chete kuendesa maerekitironi uye kuitisa zvazvino.
Iko kusungirirwa kwe chromium ions mu electrolyte inoda kuchengetwa nekugara uchiwedzera chromium makomponi kune yekumhara mhinduro. Munguva yeelectroplating, mhando yeanode zvinhu, kuumbwa kwesarudzo yeelectroplating, tembiricha, kuwanda kwazvino, simba-nenguva, inomutsa kusimba, kukonzeresa kusvibiswa, simba waveform, nezvimwewo zvinokanganisa hunhu hwekupfeka uye hunoda kudzorwa. panguva yakakodzera.
Muma electroplating, iyo materal kuti ifukidzwe inoshandiswa seye cathode, iyo simbi zvinhu simbi yakarongedzwa inoshandiswa senge anode (insoluble anode inoshandiswa zvakare), uye iyo electrolyte mhinduro ine plated simbi ions; imwe yazvino ndiyo yekuisa pakati peanode nekathodhi.
Mashoko Aluminium alloy (zvinhu zvakasarudzika)
Kushandisa Aerospace, kuvaka ngarava, kuvaka, radiator, kutakura, kugadzira michina, zvigadzirwa zvekurapa uye zvinodikanwa zvezuva nezuva
Pashure: Dhirowa aruminiyamu chiwanikwa chakabudiswa zvikamu
Zvadaro: Yakakwenenzverwa aruminiyamu chiwanikwa musu uye hwindo kugadzira zvikamu